Ntụ oyi maka Bus, Nchịkwa, ụlọ akwụkwọ Bus na Articulated Bus factory na ndị nrụpụta | ABG
SZR usoro a ụdị gbawara n'etiti n'elu ụlọ n'elu unit nke ikuku conditioner maka 8.5m ka 12.9m si ufọt ufọt-elu-ọgwụgwụ ot ụgbọ ala, nchịkwa, ụgbọ ala ụgbọ ala ma ọ bụ articulated ụgbọ ala. Ike jụrụ nke usoro ụgbọ elu ikuku ụgbọ elu sitere na 20kW ruo 40kW, (62840 ruo 136480 Btu / h ma ọ bụ 17200 ruo 34400 Kcal / h). Banyere igwe ikuku maka minibus ma ọ bụ ụgbọ ala na-erughị 8.5m, biko rụtụ aka na SZG usoro.
Ntụ oyi maka Bus, Nchịkwa, Buslọ Akwụkwọ Andlọ Akwụkwọ na Bus Bus
SZR Series, Mid-to-High-End Bus, Maka 8.5-12.9m Bus, Ọla kọpa Aluminium Fin Condenser.
SZR usoro a ụdị gbawara n'etiti n'elu ụlọ n'elu unit nke ikuku conditioner maka 8.5m ka 12.9m si ufọt ufọt-elu-ọgwụgwụ ot ụgbọ ala, nchịkwa, ụgbọ ala ụgbọ ala ma ọ bụ articulated ụgbọ ala. Ike jụrụ nke usoro ụgbọ elu ikuku ụgbọ elu sitere na 20kW ruo 40kW, (62840 ruo 136480 Btu / h ma ọ bụ 17200 ruo 34400 Kcal / h). Banyere igwe ikuku maka minibus ma ọ bụ ụgbọ ala na-erughị 8.5m, biko rụtụ aka na SZG usoro. Ma ọ bụ ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na sales@shsongz.cn maka nkọwa ndị ọzọ.
Nkọwapụta teknụzụ nke Bus A / C SZR Series:
22 kW ma obu
24 kW ma obu
28 kW ma obu
30 kW ma obu
26 kW ma obu
33 kW ma ọ bụ
Na ọdabara China si idụhe）
475 nkp / r
558 nkp / r
650CC / r
Arọ (na ipigide)
31 kW ma obu
37 kW ma ọ bụ
34 kW ma obu
36 kW ma obu
40 kW ma obu
750CC / r
SZR-IIF-D Nka na ụzụ Ozi SZR-III-D Nka na ụzụ Ozi SZR-IV-D Nka na ụzụ
SZR-IVF-D Ozi teknụzụ SZR-VD Nka na ụzụ Ozi SZR-VF-D Ozi teknụzụ
SZR-VI-D Ozi teknụzụ SZR-VIF-D Nka na ụzụ
1. The usoro nile na-agụnye ụlọ elu ụlọ, ikuku nloghachi grille, Compressor, na nwụnye ngwa, adịghị agụnye compressor mgbodo, eriri, refrigerant.
2. Igwe refrjiraeto bụ R134a.
3. Ọrụ ikpo ọkụ, na alternator bụ nhọrọ.
4. Compressor BOCK, VALEO ma ọ bụ AOKE bụ nhọrọ.
5. Onye ofufe & ikuku mmiri dị ka nhọrọ dị ka ahịhịa ma ọ bụ brushless.
6. Biko kpọtụrụ anyị na sales@shsongz.cn maka nhọrọ ndị ọzọ na nkọwa.
SZR Series R&D Azụ:
SZR usoro ikuku conditioners na-emepụta iji na-amụba anya chọrọ nke ụgbọ ala ikuku conditioners na ụgbọ ala ụlọ ọrụ. Iji mezuo ọdịdị dị mma dị mma, usoro ikuku SZR na-eji ngwakọta nke mkpuchi SMC na alloy alloy.
Ọ na - edozi nsogbu nke adịghị mma nke ejiri ụdọ eji aka ya na - acha uhie uhie nke ikuku ụgbọ elu bọs. N'otu oge ahụ, ọ dị omimi nke kachasị nke usoro na usoro, na-eburu n'uche usoro mmepe nke arụmọrụ dị elu na ịdị arọ.
Nkọwa Okwu Nzuzo nke SZR Series Bus Air Conditioner
1. Ihe mkpuchi AC: tọ na-ekpuchi adopts usoro nke SMC na alloy alloy.
E jiri ya tụnyere ọdịnala aka ejiri aka mee FRP dị elu, a na-emeziwanye ọdịdị ọdịdị nke ọma, a na-emewanyewanye nzipụta kwa ụbọchị. Ọ metụtara na ụgbọ elu ọha na ọkwa dị elu na ụgbọ elu ndị njem.
Biko tụgharịa na SUPPRT-FAQ, iji matakwuo banyere ọdịiche dị n'etiti SMC na mkpuchi iko fiber.
2. Ọdịdị AC: Mkpa na streamline udi
Ọdịdị nke SZR usoro ụgbọ ala AC na-edozi, nke mara mma na nke dị gịrịgịrị. Okpukpo nke ikuku ikuku bu 188mm, nke di ala karia ugba nke ihe eji eme ugbua.
Kacha nta ọkpụrụkpụ 188mm
3. Nhazi AC: Fechaa Ọdịdị
The condenser isi adopts ihe abịazi nọdụ V ekara etiti na-enweghị ala shei Ọdịdị, n'akụkụ doo bụ fechaa na kachasị, na evaporator nzukọ ikuku duct adopts ihe otutu ala shei integrated ekwe Ọdịdị. Site na usoro ndị a dị n'elu, ịdị arọ nke ikuku ikuku na-ebelata nke ukwuu.
Okpokoro V-anọ a na-agbanwe agbanwe
Integrated ekwe Ikuku
Fechaa Akụkụ Structure
4. Nhazi AC: Ọrụ & Mmezi Enyi na Enyi
Ihe mkpuchi elu nke SZR usoro ikuku ikuku na-agbakwunye usoro njikọ njikọ, yana ikpo mkpuchi adịghị mkpa iwepu mgbe ị na-ebu ụgbọ ala, nke na-echekwa oge ntinye. The condensing ofufe arụnyere si n'elu, na cover na-adịghị mkpa a ga-emeghe mgbe condensing ofufe a na-anọchi, na evaporating ofufe na-nọgidere na-enwe n'oge na-arụzi. N'otu oge ahụ, ọ bụ naanị ihe dị mkpa iji mepee akụkụ nke mkpuchi akụkụ ahụ, nke dị mfe ịrụzi mgbe ịrechara ya.
Ngwunye mgbatị na-egbu egbu
Condenser ofufe na mgbabere uzo Ọdịdị
5. Ọrụ AC: Igwe arụmọrụ dị elu
Ezubere SZR usoro ụgbọ elu ikuku ụgbọ ala dịka usoro nke ndị na-ahụ maka ikuku ikuku, jikọtara ya na nhọta CFD ma dabere na nsonaazụ nyocha ahụ, iji bulie ndokwa nke condenser ahụ, ma were usoro kachasị mma nke usoro enweghị oke iji nweta elu. arụmọrụ nke onye na-ekpo ọkụ ọkụ Okpomọkụ mgbanwe.
Nyocha CFD nke ikuku ọsọ nke onye na-ekpo ọkụ ọkụ
6. Ọrụ AC: Uzo ntuziaka ntuziaka di iche
A na-eji SZR usoro ụgbọ elu ikuku ikuku ụgbọ ala nke ikuku na-eduzi ikuku. Igwe ntuziaka ikuku na-agbaso ụkpụrụ Archimedes na gburugburu cone iji mepụta nzukọ ikuku na-ekpochapụ ikuku ọkụ na-enweghị ndu ikuku. Nsogbu nke nloghachi nke ikuku na-eme ka mmetụta ikuku ikuku nke ikuku ikuku dịkwuo mma.
Site na nyocha nyocha na nnwale nnwale, nzukọ ikuku na-enwekwu ezi uche mgbe etinyere ikuku ikuku. Enweghị shroud. A na-achụsasị ikuku ikuku na-asọpụta, ihe ọhụụ na-apụtakwa ìhè.
Nyocha nke ikuku na-enweghị mkpuchi ikuku & ikuku na ikuku mkpuchi
7. AC Performance: Naa refrjiraeto odori olu
Tụnyere ndị omenala ụgbọ ala ikuku conditioner, SZR usoro adopts kachasị okpomọkụ Exchanger imewe na kachasị imewe nke esịtidem piping ngwa. Belata ụgwọ ọrụ refrjiraeto site na 30%. Site na mbenata mmetụta nke ịpụpụ refrjiraeto na gburugburu ebe obibi.
The SZQ Series Bus AC Function Nkwalite （Nhọrọ）
1. Defroster na ntụ oyi na ụlọ ọkwọ ụgbọ ala
Enwere ike itinye ihe nrụpụta, na AC n'ime ụlọ ọkwọ ụgbọ ala dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, iji nye onye ọkwọ ụgbọ ala ọnọdụ dị mma.
2. Ngwakọta teknụzụ njikwa ejikọtara ọnụ
Mwepụta nke ogwe njikwa na ngwa ọrụ ụgbọ ala dị mfe maka nhazi usoro nke njikwa ụgbọ ala. A na-agbakwunye ọrụ ntanetị nke njikwa ngwaahịa iji kwado njikwa njikwa ndị ahịa.
3. Plumbing na kpo oku technology
Enwere ike ibute pipụ mmiri kpo oku site na isi nke evaporator iji ghọta ọrụ kpo oku nke ikuku ikuku ma zute ihe achọrọ nke ọnọdụ ihu igwe dị na bọs na mpaghara oyi.
4. Teknụzụ dị ọcha nke ikuku
Ọ gụnyere tumadi ọrụ anọ: nchịkọta uzuzu electrostatic, ọkụ ọkụ ultraviolet, generator ion siri ike, na nzacha fotocatalyst, nke nwere ike nweta oge niile, mgbochi nje na igbochi nsogbu, iwepụ isi ísì na mwepụ ájá dị mma, na-egbochi ụzọ nje virus.
5. Remote akara nchoputa technology
Ọrụ "njikwa igwe ojii", chọpụta njikwa na nchoputa, ma melite ọrụ ngwaahịa na nlekota ikike site na itinye ngwa data.
6. Nchịkwa Iwu Ike
Dabere na ọnọdụ okpomọkụ dị na bọs na gburugburu ebe obibi, a na-agbanwe usoro nke onye ofufe na compressor n'ọtụtụ ọkwa iji belata mbido na nkwụsị nke compressor, meziwanye nkasi obi nke ndị njem, ma hụ na usoro a na-arụ ọrụ nke ọma. .
Ngwa nke SZR Series Bus AC:
Site na mmepe nke ahịa na mmụba nke ụkpụrụ ibi ndụ, bọs ejiri nwayọ nwayọ site na ụzọ njem dị mfe nke ọdịnala na itinyekwu uche na mmelite nkasi obi na njem njem. Ya mere, ndị njem dị elu na-arịwanye elu site n'afọ ruo n'afọ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. SZR na-elekwasị anya na ọdịdị ahụ ma dabara adaba maka ụgbọ ala dị elu na nke etiti. Echiche ahịa dị mma.
1. widedị dịgasị iche iche nke ngwa
Ngwurugwu ala nke usoro SZR kwesịrị ekwesị maka arcs nke ụlọ nwere radius nke 6 ~ 72 mita, otu akụkụ ahụ bụ 1860mm, a na-enyekwa ụzọ ikuku ahụ ozugbo n'igwe ikuku n'akụkụ abụọ nke bọs ahụ, nke dị mfe ịwụnye. . Usoro ngwaahịa nwere ụdị 8 site na obere ruo nnukwu, ikike jụrụ oyi bụ 20 ~ 40KW, dabara maka ụgbọ ala 8 ~ 13.
5. Nchịkwa Iwu Ike
Mee ka obosara nke ulo ozo di iche
2. Ogwe nhazi nhọrọ
Usoro SZR bara ọgaranya na nhazi maka otu ndị ọrụ dị iche iche, na enwerekwa ọtụtụ nhazi maka ndị ọrụ ịhọrọ.
Nhazi nke njedebe: tumadi maka nhazi mbubata nke njem ọha na eze na bọs ndị njem nleta dị elu, ndị na-akwado na ngwa ndị ọzọ
Nhazi akụ na ụba: A na-elekwasị anya na nhazi nke bọs akụ na ụba, ụgbọ ala ndị njem nleta, ndị fan na ngwa ndị ọzọ.
3. Ihe Ngwa nke Bus Air Conditioner SZR Series:
Ankai (JAC) 600 Bus arụnyere na SONGZ ntụ oyi na Riyadh (Saudi Arabia)
Ankai (JAC) 3,000 Bus arụnyere na SONGZ ntụ oyi na Riyadh (Saudi Arabia)
Foton 1,000 Bus arụnyere na SONGZ ntụ oyi na Naypyidaw (Myanmar)
Nke gara aga: Ntụ oyi maka Mini na Midi City Bus ma ọ bụ Bus Tourist
Osote: Ọnọdụ ikuku nke ụgbọ ala maka ụgbọ ala, nchịkwa, buslọ akwụkwọ na ụgbọ ala echekwara